ဗိသုကာဒီဇိုင်း -, Ltd. ဒစ်ဂျစ်တယ် Manufacturing Co. ,,
ဗိသုကာပုံစံကို 3D ပုံနှိပ်ခြင်း
ယင်းဗိသုကာလယ်ပြင်၌ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၏လျှောက်လွှာခြုံငုံဗိသုကာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းမှကန့်သတ်မထားဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းအစီအစဉ်အတွက်သေးသေးလေးမော်ဒယ်များ (စသည်တို့ကိုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမော်ဒယ်များ, လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းခြင်း simulation မော်ဒယ်များ, သဲကျောက်ပြားကို,), ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုအတွက်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ပြင်ပ display ကို။
3D site ကို layout ကိုနှင့်သဲစားပွဲပေါ်မှာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း
3-dimentional site ကို layout ကိုနှင့်သဲ table ထဲမှာ, ရုံးအဆောက်အဦးများ, မျှော်စင်ရိန်း, သံမဏိအရက်ဆိုင်, ကိုက်စက်ယန္တရား, etc ၏ယာယီဆောက်လုပ်ရေးကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းကို site ကို layout ကိုနှင့် CI ဒီဇိုင်းသဲစားပွဲပေါ်တွင်ဆိုက်အပြင်အဆင်များဖြန့်ကျက်, စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတို့က ပို. များနှင့်အလှနျထင်ဟပ်စေနိုင်ပါသည်။ 3-dimentional site ကို layout ကိုနှင့်သဲစားပွဲပေါ်မှာလည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်နှင့်စီမံကိန်းအရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေထိရောက်စွာ, site ပေါ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရောင်ပြန်ဟပ်ကအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေ, သယံဇာတခွဲဝေပိုကောင်းအောင်ကူညီနိုင်သည်။ 3D ပုံနှိပ်အမှန်တကယ်တစ်အတော်လေးရင့်ကျက်တဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂတျမှာ, 3D ပုံနှိပ်ခြင်း ပို. ပို. အိမ်ထောင်စုဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်ကိရိယာများ, ပစ္စည်းများနှင့်သင်အိမ်မှာလိုအပ်ပါတယ်ပင်ကိုပုံသွင်းစက်အမျိုးမျိုးတို့ကို print ထုတ်နိုင်, တနေ့ငါတို့သည်ကိုယ်အိမ်သူအိမ်သားထွက် print ထုတ်နိုင်, အပေါငျးတို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုလိမ့်မည်။
အကြံအဖန်တွေချည်းအစိတ်အပိုင်းများကို 3D ပုံနှိပ်ခြင်း
SL 3D ပရင်တာအကြံပြု
3D ပရင်တာ၏ 3DSL စီးရီးအားလုံးစီးရီး